ဘယ်လိုရှာသလဲ - allout.cheap - ၅၀% သို့မဟုတ် ၁ + ၁ စားသည် သောက်ပါ | နေ
အကောင့်၀င်ခြင်း or Register
ရက် ၃၀ ကြာအခမဲ့စုံစမ်းပါ
အစားအစာ၊ သောက်စရာ - တည်းခိုနိုင်မှုကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။
ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ allout.cheap ;
အသင်း ၀ င်ပါ။
သင်၏အသင်းဝင်တွင် "အသင်းဝင်အတည်ပြုခြင်း" ဆိုသောခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။
ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ၀ န်ထမ်းများအားသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအသေးစိတ်ကိုပြသပါ။
သင်၌ရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စတိုးဆိုင် / နေရာထိုင်ခင်းတို့ပေါ် မူတည်၍ ၅၀% သို့မဟုတ် ၁ + ၁ ပေးသည်။
* တက်ကြွသောအသင်းဝင်တစ် ဦး တည်းသာ၎င်းတို့၏ menu တွင်အောက်ပါအတည်ပြုခလုတ်ရှိသည်။
အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး လျှင်လူ ဦး ရေအများဆုံး။
စတိုးဆိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်အမျိုးအစားကို ၅၀% လျှော့ချသည်။
စတိုးဆိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င်အမျိုးအစား ၁ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း ၀ င် ၁ + ၁ ကိုလျှော့စျေး။
(ထုတ်ကုန် (၂) လုံး၏တန်ဖိုးမတူညီပါကသင်စျေးအမြင့်ဆုံးပေးသည်။
(ဥပမာ pastry shops)
(ဥပမာ - ရေခဲမုန့်ဆိုင်)
* အာရုံစူးစိုက်မှု * - ဆိုင်များသည်ရေ၊ အချိုရည်၊ ဖျော်ရည်၊ လက်ဖက်၊ စွမ်းအင်၊ ဘီယာစသည့်ပုလင်းများကိုဖယ်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
(ဥပမာ၊ ကဖေးများ၊ မုန့်ဆိုင်များစသဖြင့်)
(ဥပမာ - ကော်ဖီဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကလပ်များစသဖြင့်)
အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး လျှင်အများဆုံးနေရာထိုင်ခင်းနှင့်လေလံဆွဲနိုင်မှု။
- ALLOUT.CHEAP ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
The allout.cheap ဂရိနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိစားသောက်ဆိုင်များ၊ ကဖေးများ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ တည်းခိုခန်းများနှင့်သူတို့၏ဆိုင်ပိုင်ရှင်စတိုး၏အကူအညီဖြင့်ဈေးဝယ်သူများကိုဂရိနိုင်ငံရှိပထမဆုံးသောအစားအစာ၊ အဖျော်ယမကာ၊ ကော်ဖီနှင့်နေရာထိုင်ခင်းကလပ် - နေရာထိုင်ခင်း။
၁။ သင်သတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းသင်လိုချင်သောစားသောက်ဆိုင်၊ ကဖေးဘား၊ ကလပ်သို့မဟုတ်နေရာထိုင်ခင်းကိုရှာဖွေပါ။
2 ။ ဆိုင်နေရာထိုင်ခင်းကိုမစောင့်ရန်နှင့်ဖော်ပြရန်အတွက်ဖုန်းကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ allout.cheap .
3. သင်သောက်သောပျော်စရာ - ကော်ဖီသို့မဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်တက်ကြွသောအသင်း ၀ င်တစ် ဦး အားအတည်ပြုပြီးသောအခါသူ၏ ၀ န်ထမ်းများဆိုင်သို့ရောက်ရှိချိန်တွင်သင်နောက်ဆုံးအကောင့်ရရှိသည်။ အဖျော်ယမကာသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအစားအစာအပေါ်% ။ သင်ကြယ်ကို အသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်အကဲဖြတ်ပြီးသင်စုဆောင်းထားသည့်စုစုပေါင်းပမာဏကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
- စားသောက်ဆိုင်တိုင်း၏အမြင့်ဆုံးနံပါတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ညစာ စား၍ ရနိုင်ပါသလား။
ခွင့်ပြုထားသောလူ ဦး ရေအများဆုံးအရေအတွက်သည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူအများစုတွင်စားသောက်ဆိုင်ကသင့်အားအထူးလျှော့စျေးပေးရန်မလိုပါ။
- ကျွန်ုပ်သည် EATOUT.CHEAP ၏အသင်း ၀ င်ဖြစ်သည့်သောက်စရာများအတွက်ကျွန်ုပ်သည် ၅၀% သောငွေပမာဏကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်မရရှိပါသလဲ။
The eatout.cheap ဂရိနိုင်ငံတစ်လွှားတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစားသောက်ဆိုင်များကို ၀ ယ်ယူသူများကိုဂရိရှိပထမဆုံးအစားအစာကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 50% သည်နောက်ဆုံးဥပဒေကြမ်းတွင်အထူးသီးသန့်စားသောအစားအစာဖြစ်သည်။
- ပိတ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်၏အမျိုးအစားများ။ ဘာကြောင့်ဒီစာရင်းထဲမှာရှိနေဆဲလဲ။
Η allout.cheap ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်လိုသူများသည်သူတို့ဆိုင်ပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်တလောက်များမှချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကြားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့်သဘောတူသည်။ အကယ်၍ ဤအရာမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် "Store Report" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းစာမျက်နှာအားသင်သိစေလိုသည်။
- စားသောက်ဆိုင်မှကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီးကဖေးနှင့်၎င်းတို့အားလျှော့စျေး package အိမ်အတွက်ကျွန်ုပ်ရနိုင်ပါသလား။
အထူးလျှော့စျေးကော်ဖီ - စားသောက်ဆိုင်နေရာတစ်ခုတည်းအတွက်သာသက်ဆိုင်သည်။
CAUTION * ကလပ်အခွင့်အရေးကိုအခြားစတိုးဆိုင်များနှင့်မရောနှောနိုင်ပါ။
- ဘာကြောင့်စျေး ၀ ယ်သူတွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်များများသောနှုန်းထားများပေးကမ်းနေတာလဲ။
၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက် allout.cheap အစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ကော်ဖီနှင့်အပြင်ဘက်တွင်နေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကို win-win လို့ခေါ်တဲ့လူနည်းစုကိုပိုင်ဆိုင်တယ်။
အကျပ်အတည်းကြောင့်သူတို့၏ဖျော်ဖြေရေးအတွက်အသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ နေ့စဉ်စျေး ၀ ယ်ခြင်းများနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းတို့၏အခမဲ့ကြော်ငြာများသုံးစွဲခြင်းမှအသင်းဝင်များသည်ယခုအခါမကြာခဏထွက်သွားနိုင်သော်လည်းအရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်နှုန်းထားများကိုမရကြ။ အကောင့်၏ကျန်။
- တစ်ပတ်လုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
စတိုးဆိုင်အများစုသည်၎င်း၏အသင်း ၀ င်များအတွက်တစ်ပတ်ပတ်လုံးရနိုင်သည် allout.cheap.
သို့သော်စတိုးဆိုင်တစ်ခုစီသည်သောကြာနေ့နှင့် / သို့မဟုတ်စနေနေ့နှင့် / သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေ၊ ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံးနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များကိုဖယ်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ခြွင်းချက်များစာရင်းရှိသည့်စတိုးဆိုင်၏စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
- ကျွန်ုပ်သည်တစ်လဒေါ်လာ ၁ ဒေါ်လာဖြင့်စမ်းသပ်ချက် ၁ ဒေါ်လာနှင့်ထပ်တူနိုင်သလား။
In allout.cheap သင်၏အစစ်အမှန်ငွေစုဆောင်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရည်မှန်းခဲ့ပြီး၊ ၎င်းကိုစိတ်ကူး - ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင့်ထံမှမည်သည့်ကတိက ၀ တ်မှမရှိပါ။
1 €ဖြင့်ပထမဆုံးစမ်းသပ်သည့်လကုန်ပြီးနောက်၊ သင်၏စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်သင်ရွေးချယ်သောအထုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စျေးနှုန်းမူဝါဒမှာ -
1 မှ 3၊ တစ်လလျှင်သာ ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်။
2 မှ 3၊ တစ်လလျှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ။
3 မှ3ဝန်ဆောင်မှုများ (allout.cheap) သာ 12,99 € / လ။
1 မှ3€ / တစ်နှစ်သာလျှင်ဝန်ဆောင်မှု။
2 မှ 3၊ တစ်နှစ်လျှင် ၀ န်ဆောင်မှုများသာရှိသည်။
3 မှ3ဝန်ဆောင်မှုများ (allout.cheap) သာ 119,90 € / တစ်နှစ်။
* စျေးနှုန်းများတွင်အခွန်မပါဝင်ပါ။ *
ကောင်းသောအရာများ၊ ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုမျှဝေရမယ်၊ အစားအစာ၊ သောက်စရာ၊ ကော်ဖီနှင့်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်တစ်ဝက်ကိုပေးရမယ်။ သင်တို့အတွက်ကြော်ငြာများအနေဖြင့်သင်နှင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်စတိုးများထံမှလစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အထုပ်တစ်ခုလျှင်လူ ၁ ယောက်လျှင်သင်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းအတွက်လစဉ်ကူပွန် subscription ကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက်သင်အကျိုးရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်၏သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုစမ်းသပ်သည့်လကိုသက်တမ်းတိုးခြင်း။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်စတင်နိုင်ပြီး ၅၀% (သို့) ၁ + ၁ ကိုကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများမှ ၁ လကြာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြင့်လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အချိန်အကန့်အသတ် (လစဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်) နှစ်ပတ်လည်) ။
မီနူးသို့သွားပြီး“ Try it now” ဆိုသောမီးခိုးရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ package များမှရွေးချယ်ပါ။
တစ်လအတွက်ယူရို ၁,၀၀၀ ပေးပြီးသင်ရွေးချယ်သော package သို့အလိုအလျောက်ဆက်သွားပါ။
ဥပမာအားဖြင့်မိဘတစ် ဦး သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး အားသားအားလက်ဆောင်ပေးလို။ သူသို့မဟုတ်သူမ၏ subscription ကိုစီမံလိုပါကသို့မဟုတ်မွေးနေ့အတွက်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုလက်ဆောင်ပေးလိုပါကမီနူးကိုသာနှိပ်ပါ။
သင်လိုချင်သော package ကိုရွေးချယ်ပြီး "လူ ၁ ယောက်ထက်ပိုတဲ့အတွက် Gift" ကိုရွေးပါ။
စာရင်းပေးသွင်းခြင်း ၀ ယ်ပြီးနောက်ဝယ်သူသည်လက်ခံသူကိုခန့်အပ်သည်။ အကောင့်တစ်ခုအလိုအလျောက်ဖန်တီးထားသည်။
လက်ခံသူထံသို့လက်ဆောင်အကြောင်းကြားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်သို့ ၀ င်ရန်အမိန့်ပေးရန်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့သည်။
လက်ခံသူနှင့် ၀ ယ်သူနှစ် ဦး စလုံးသည် ၀ ယ်သူအားရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ စတိုးဆိုင်ရှိ“ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်” စာမျက်နှာမှတဆင့်စာရင်းသွင်းခြင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းအမိန့်များကိုကြည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပို့ဆောင်သည့်လိပ်စာကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
လူနှစ် ဦး အကြားဒေတာကိုမျှဝေသည့်အခါသင့်ဖောက်သည်၏အထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်လက်ဆောင်ပေးခြင်းသည်လက်ခံသူအားမည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာကိုမျှဝေသင့်သည်ကိုအသေအချာဆုံးဖြတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လက်ခံသူများသည်သူတို့ပေးသွင်းထားခြင်း၏မူလအစီအစဉ်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါ။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးပြုသူများအားသူငယ်ချင်းများမှလက်ဆောင်တစ်ခုအားမေးလ်ဖြင့်တောင်းခံရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှတက်ကြွသော ၀ န်ထမ်းတိုင်းသည်မိမိ၏မီနူးထဲမှ "ပိုက်ဆံအိတ်" ခလုတ်ကိုရှာနိုင်သည်
ဘယ်သူ့ကိုသူနှိပ်ချင်လဲ၊ သူလိုချင်ရင်၊ သိမ်းဆည်းပြီးတဲ့နောက်၊ ဘယ်လောက်ပိုက်ဆံနဲ့ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြလိမ့်မယ်။
သင်နှင့်အတူစတင်သောသင်သို့မဟုတ်သင်ကူညီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှစတင်သောသူငယ်ချင်းတိုင်းအတွက်ပထမစမ်းသပ်မှုလသက်တမ်းတိုးခြင်းသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကူပွန်ကုဒ်မှတစ်ဆင့်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြင့်သင့်ကိုဆုချသည်။ သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်၏ link ကိုမျှဝေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်သင့်တွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိပါသလား။
ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ယခုစတင်ပါ ဒီမှာ နှင့်ကော်မရှင် 60% အထိအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
2. သင်၏အီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်။ စနစ်သို့ဝင်ပါ။
မီနူးမှရွေးချယ်ပါ စီးပွားရေး - စီးပွားရေးအသစ်
Button ကိုနှိပ်ပါ - ယခုစတင်ပါ။
၃။ သင်လျှော့ချင်သောအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်“ Free Business Package” ကိုရွေးပါ။
Package ကိုဝယ်ပါ။ သင်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်စာရင်းသွင်းပြီးပါကဤခလုတ်သည် "UseaPurchased Package" ကိုဖတ်ပါလိမ့်မည်။
လေလံအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ လယ်ပြင်နှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းများကိုဖြည့်ပါ နှင့်သင်၏စာရင်း၏ preview ကိုကြည့်ပြီးနောက်, အတည်ပြုခြင်းနှင့်သင်၏နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်း။ လေလံရက်စွဲသတ်မှတ်ပါ။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှအတည်ပြုချက်အပြီးတွင် MENU သို့သွားပါ : ရရှိနိုင် *
* အကယ်၍ သင့်အားပြောင်းလဲမှုပြုရန်ခွင့်မပြုပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ link မှ log out လုပ်ပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ င်ရောက်ခြင်း
အစားအစာ၊ အဖျော်ယမကာ - ကဖေးများနှင့်နေရာထိုင်ခင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိနိုင်သည် စား - သောက် - နေဖို့ခလုတ်ကို Booking Calendar - သင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးသော Offer Availability Calendar ကိုသင်တွေ့မည့်ပြက္ခဒိန်များ။
ဒီအင်္ဂါရပ်ကသင့်အားထောင်ပေါင်းများစွာသောမောက်စ်ကလစ်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ ရက်စွဲအကွာအဝေးနှင့်သင်လျှောက်ထားလိုသောအခြေအနေကိုရွေးချယ်ပါ၊ နှိပ်၍ ရွေးချယ်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်များ၊ သင်္ကေတများနှင့်စာသားများကိုသုံးပါ။ သင်တို့သည်လည်းကွဲကွာအရောင်များကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစစ်ဆေးရန်၎င်းကိုသင်ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည် [အီးမေးလျ protected] မှတ်ပုံတင်ထားသောစီးပွားရေးအီးမေးလ်မှတာ ၀ န်ရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပိုင်ရှင်၏ဓာတ်ပုံ။
© All rights reserved 2019-2020 | allout.cheap | 50% ကိုစား | သောက်စရာ | နေဖို့
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုသင့်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်, တစျခုလုံးရဲ့ site ၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုများနှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည် privacy ကိုမူဝါဒက.
ဤ site သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရကြောင်းသေချာစေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ